Umkhiqizi wezempilo unezela ngezinto - i-Wisepowder BLOG
Yini iMagnesium L-threonate? IMagnesium L-threonate (778571-57-6) ivelela njengohlobo lwamaphilisi we-magnesium olumunca kakhulu emakethe namuhla. I-Magnesium iyiminerali ejwayelekile engaba khona [...]
Kungani Sidinga iNicotinamide Mononucleotide (NMN) Yize ukuguga kungenakugwemeka, kunamathuba okuguqula inqubo, ngenxa yeNicotinamide Mononucleotide (NMN). Ukuphila kuze kufike ebudaleni obudala kungamaphupho awo wonke umuntu [...]
Yini i-Glycine Propionyl-L-Carnitine (GPLC) I-Glycine Propionyl-L-Carnitine ibhekisa ohlotsheni oluboshwe ngamangqamuzana lwepropionyl-L-carnitine kanye ne-amino acid glycine. Ihlukaniswa emndenini ngokufanayo neCarnitine [...]
Uma uqhathanisa iPterostilbene Vs Resveratrol, uzobona ukuthi kunamaqiniso amaningi obulahlekile ngalokhu okubili. Ukuphila impilo enempilo kudinga ukuthi ubeke amazwana ku-a [...]
I-Oleoylethanolamide (OEA): Umuthi Wokulahlekelwa Isisindo Osiza Ukulawula Iphango
Kuyini i-Oleoylethanolamide (OEA)? I-Oleoylethanolamide (i-OEA) ingumlawuli wemvelo wesisindo, i-cholesterol, nesifiso sokudla. I-metabolite ihlanganiswa ngamanani amancane emathunjini amancane. I-molecule yemvelo inesibopho [...]
Izigidi zabantu laphaya zichitha imali eningi kakhulu emikhiqizweni elwa nokuguga njengeNicotinamide Riboside chloride. Noma ukuguga kuyinqubo engokwemvelo, abantu abafuni nje ukubukeka begugile. [...]
Yini iRed Yeast Rice Extract Imvubelo irayisi ekhishwe irayisi (RYRE) yenziwa lapho uhlobo oluthile lwesikhunta esaziwa njengeMonascus purpureus lubilisa irayisi. Irayisi liphenduke laba bomvu ngokumnyama [...]
Kuyini Black Garlic Khipha? Ukukhishwa kukarikhi omnyama kuyindlela kagalikhi etholakala ekuvutsheni nasekugugeni kukagalikhi omusha. Ukwelashwa kukgalikhi omusha ukuze [...]
Yini i-Anandamide (AEA)? Igama elithi Anandamide (AEA) livela egameni elithi Ananda okusho ukuthi likhiqiza injabulo. I-endocannabinoid ehlukaniswe neqembu lama-amide acid elinamafutha. Ngokwesakhiwo, [...]
IGlutathione izuzisa izinto eziphilayo ngezindlela eziningi ngokusebenza njenge-antioxidant. Kuyinhlanganisela ye-amino acid ekhona kuwo wonke amaseli omuntu. Yonke into ephilayo ine-glutathione emzimbeni wayo. [...]
Izinzuzo eziyi-11 zezeMpilo zeReververrol Supplements
Kuyini iResveratrol? I-Resveratrol iyinhlanganisela yemvelo ye-polyphenol esebenza njenge-antioxidant. Imithombo ye-Resveratrol ifaka iwayini elibomvu, amagilebhisi, amajikijolo, amakinati kanye noshokoledi omnyama. Le nhlanganisela ibonakala inkulu kakhulu [...]
Umhlahlandlela Wokugcina we-Quercetin
Yini i-quercetin? I-Quercetin (117-39-5) ingeyeqembu lama-compounds okuthiwa i-flavonoids. Igama layo lamakhemikhali ngu-3, ​​3 ', 4', 5,7-pentahydroxyflavone. I-pigment ekhona ngokwemvelo kwimifino eminingi, izithelo, [...]